Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Memphis Depay Iyo Kooxda Barcelona? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Barcelona ayaa u muuqata mid horumar ka samaynaysa saxeexa weeraryahanka kooxda Lyon ee Memphis Depay oo kamida tiro ciyaaryahano ah oo uu macalinka dhawaan-galka ah ee Ronald Koeman ka doonayo Camp Nou.
Tababare Koeman ayaa shaqada Barcelona ka bedelay Quique Setien kaddib xilli ciyaareed fadeexad ah oo ay kooxdaasi soo qaadatay waxaana uu Koeman wadaa dedaalo uu ciyaartoyda ku kala nadiifinayo isla markaana dhiig cusub kooxda ugu shubayo.
Koeman ayaa ilaa hadda Barca ka diray Ivan Rakitic oo Sevilla ku biirat, Vidal ayaa qarka u saaran Inter Milan halka Luis Suarez uu Juventus aad ugu dhaw yahay waxaana jira tiro ciyaaryahano ah oo kale oo uusan mustaqbalkoodu lugo adag ku taagnayn.
Sida uu hadda sheegayo saxafiga xog-ogaalka ah ee Fabrizio Romano, Memphis Depay ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaadhay Barcelona taas oo ah talaabo muhiim ah oo ay Barca u qaaday dhinaca saxeexa Depay.
Romano ayaa intaas ku daraya aysan wali wax heshiis ah gaadhin Lyon iyo Barcelona balse wadahadaloodu yihiin kuwo socda oo furan. Inay labada kooxood heshiis isku fahmaan ayaa dhammaystiri doonta waxkasta oo Memphis Depay ka xiga inuu ciyaaryahan Barca ah noqdo.
Dhinaca kale Blaugrana ayaa wadahadalo kula jira wakiilada khadka dhexe ee Liverpool ee Gini Wijnaldum walow aysan wax dalab ah oo rasmi ah u gudbinin Reds.
Liverpool ayaa sheegtay inay Wijnaldum oo heshiiskiisa Anfield hal sano ka hadhay 15 Milyan ilaa 22 Milyan oo Pound kaga iibin doonto kooxaha xiisaynaya.